कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक | Biswas News
काठमाडौं– कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहिबार बिहान परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो ।
यसपटक कक्षा १२ का सबै समूहको नतिजा एकैपटक प्रकाशित गरिएको परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार सार्वजनिक भएको नतिजामा ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेमा ११ हजार १६९ परीक्षार्थी रहेका छन् । यस्तै ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने ११,२२१, २.०१ देखि २.८० जीपीए ल्याउनेमा५८,३४५, २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउने ९०,२९९ परीक्षार्थी रहेका छन् ।
यस्तै १.६१देखि २.० जीपीए ल्याउने ६६,४३८, १.२१ देखि १.६० जीपीए ल्याउने २२, ७३४, ०.८१ देखि १.२० जीपीए ल्याउने ४४८८ र ०.०० देखि ०.८० जीपीए ल्याउने १९९ जना रहेका छन् ।
यो वर्ष परीक्षामा करिब ४ लाख विद्यार्थी सहभागी थिए।
परीक्षा गत वैशाखमा भएको थियो ।रातोपाटीबाट
Previous articleअाउनुहाेस् हेर्नुहाेस् तपार्इकाे अाजकाे दिन कस्ताे हुनेछ ? तपार्इकाे राशिफल
Next articleअाउनुहाेस् हेर्नुहाेस् तपार्इकाे अाजकाे दिन कस्ताे हुनेछ ? तपार्इकाे राशिफल